एजेन्सी । मोवाइल फोनबाट उत्पन्न हुने विकिरणले स्वास्थ्यमा पार्ने समस्या थाहा हुँदा धेरै मानिसले पाईन्टको गोजीमा (विशेषगरी जिन्स पाइन्टको गोजीमा) मोवाई राख्ने गर्छन् । मोवाईलले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने विभिन्न अध्ययनले देखाउदै आएका छन् । यी अध्ययनलाई एउटा वृहत अध्ययन समिक्षाले पुनःपुष्टि गरेको छ ।
अस्टेलियाको युनिर्भसिटी अफ क्यासलका वैज्ञानिकहरुको समूहले नयाँ समिक्षा गरेका हुन । विश्वको १४ प्रतिशत जनसंख्या बच्चा जन्माउन संघर्ष गरिरहेकै बेला गोजीमा राख्ने फोनको विकिरणले पुरुष स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
वीर्यको गतिशिलता र जोशको अभावमा कोष नष्ट हुने गरेको उनीहरुको समीक्षामा उल्लेख छ । २१ जना वैज्ञाानिकले १० ओटा अध्ययन समिक्षा गरेका थिए । उनीहरुले सेलफोनको विकिरण र यसले वीर्यमा पार्ने अशरबारे समिक्षा गरेका थिए । समिक्षाका क्रममा १४९२ मानिसका वीर्यको नमुना परीक्षण गरिएको थियो ।
वीर्यको गतिशिलता र जोशको अभावमा कोष नष्ट हुने गरेको उनीहरुको समीक्षामा उल्लेख छ । २१ जना वैज्ञाानिकले १० ओटा अध्ययन समिक्षा गरेका थिए । उनीहरुले सेलफोनको विकिरण र यसले वीर्यमा पार्ने अशरबारे समिक्षा गरेका थिए । समिक्षाका क्रममा १४९२ मानिसका वीर्यको नमुना परीक्षण गरिएको थियो । (नेपालीटुल)
प्रेम सम्बन्ध – माया गर्ने मान्छे संग टाढा हुँदा कसरि प्रेमलाई जोगाइ राख्ने ? (भिडियो सहित्)
सेति नदीको विचमा ढुङगामा अड्कीएको मानिस को हुन यस्तो अबस्थामा ? निकाल्नेले खोले यस्तो कुरा
से,क्स नपुगेर भागेको भनेपछी भयो ल,फडा, छोरीले रु,दै बताइन ममिले घरमै केटा राख्ने योजना गरेको क,र्तुत(भिडियो सहित)